IALUMINIYAM KUNYE NENSIMBI YEPATIO YEFANITSHALA - IFANITSHALA
Eyona Ifanitshala IAluminiyam kunye neNsimbi yePatio yefanitshala
IAluminiyam kunye neNsimbi yePatio yefanitshala
Nasi isikhokelo sethu kwifenitshala yensimbi yealuminium vs steel kubandakanya ukulunga kunye nokubi kunye neendleko. Ipatio entle ifanelwe ukonwatyelwa ixesha elide kwaye ukuba usecicini lokukhetha ifenitshala yakho yepatio, ke qhubeka ufunde ukuze wazi ezona zinto zimbini zomeleleyo kwifenitshala yakho yangaphandle.
I-Aluminium kunye nefenitshala yentsimbi yimpahla yakho yokuya xa ufuna utyalomali lobomi bakho ngaphandle.
Zininzi izinto zefenitshala onokukhetha kuzo, kodwa akukho nto ihlala ihleli kwaye ihlala ixesha elide kunezinto zesinyithi. Azandisi okanye zenze isivumelwano kwaye umphezulu wazo awuzukuqhekeka ngokulula phantsi kweemeko zemozulu ezigabadeleyo, ngelixa izinambuzane kunye nokubola nazo zingenaxhala.
Kodwa phakathi kwezona zinto zimbini zomeleleyo ezizezona zilungele iimfuno zakho?
ndingayithenga phi iringi yothethathethwano
Iifenitshala zeFenitshala zePatio ezingenazintsimbi kunye neNgxelo
IAluminiyam iPatio Iifenitshala zefanitshala kunye neengozi zayo
I-Aluminium vs Steel Patio Iindleko zefanitshala
Yeyiphi iAluminiyam ebhetele okanye intsimbi yefanitshala yangaphandle?
Ngaba i-Aluminium Rust?
Ngaba Powder Camera Rust?
Izinyithi ezibini ezibonakala zifana kodwa zihluke kakhulu. Isinyithi somelele nje kune-aluminium ethintela imiphunga okanye naluphi na uhlobo lomonakalo kumphezulu wayo.
Nangona ialuminium ayinamandla kwaye yomelele njengentsimbi, ikhaphukhaphu. Amandla ayo kubunzima bobunzima yi-1/3 yobunzima obuthetha ukuba kulula ukuhamba ifenitshala yakho yepatio xa kufika undwendwe olungalindelekanga okanye ukuba ufuna ukulungisa ifanitshala yakho yangaphandle kube kanye ngexeshana.
Xa kuziwa ekumelaneni nomhlwa, intsimbi iyagqwesa ngenxa yezongezo ze-chromium ezenza ifilimu engabonakaliyo ejikeleze i-still and non-porous. Jonga le tafile yokutyela yangaphandle yealuminiyam kwiPier 1. [ikhonkco elixhasiweyo]
IAluminiyam kwelinye icala ine-oxidization ephezulu ethetha ukuba xa ityhilekile emoyeni okanye kuyo nayiphi na iarhente ye-oxidizing, iya kuphuhlisa kwangoko ifilimu enzima eyenziwe nge-aluminium oxide.
Ifilimu ikhusela umphezulu ngokwenza ukuba i-aluminium inganyangeki. Nangona kunjalo, umphezulu we-oxidized unokuwukhupha umbala wefenitshala yakho ye-aluminium. Ukususa inkangeleko enqatyisiweyo, ungayisusa ngokulula ngokuyicoca ngesepha kunye namanzi.
izipho zabatshakazi ezivela kwintombi
Ifenitshala yeAluminiyam ayenzi kwaye igcine ubushushu obuninzi xa kuthelekiswa nezinye izinyithi ezenza ukuba ibe yifenitshala yesinyithi ebonakalayo ukuba ifanitshala yakho yangaphandle ikubonisa ngokupheleleyo.
Isinyithi ngakwelinye icala siphendula kubushushu okanye kubanda ngokukhawuleza, ke ukuba ipatio yakho ikwindawo enemozulu embi, unokufuna ukuqwalasela enye into okanye ukongeze izihlalo zepatio zentsimbi.
Xa kufikwa ekusebenzeni, intsimbi kulula kakhulu ukuyinyusa ngelixa ialuminium inokuba ngumceli mngeni kodwa kulula ukusika kunentsimbi.
Iifenitshala zeFenitshala zePatio ezingenazintsimbi kunye neengozi
Ifenitshala yensimbi yentsimbi yomelele kakhulu kwaye ngenxa yoxinano lwayo oluphezulu ayizukutsalwa ngokulula nokuba kunomoya onamandla. Ukuba awukwazi ukuhambisa okanye ukugcina ifanitshala yakho yepatio xa ingasetyenziswanga okanye ngexesha losuku olunesaqhwithi, intsimbi engenasici yinto elungileyo.
Nangona ukumelana nomhlwa kunye nokubola, kungcono ukufaka isambatho somgubo phezu komhlaba ukukhusela ngakumbi xa ipatiyo yakho ikufuphi namanzi anetyuwa.
Eziluncedo: yanamhlanje ijongeka, yomelele, irusi-enganyangekiyo, yomelele kwaye yomelele.
Bendlela: kugcina ubushushu nengqele, akukho lula ukuhamba, kuyabiza
Ifenitshala yeAluminiyam yeepatio nangona ingomelelanga njengentsimbi, iseyinto eyomeleleyo neyomeleleyo ekusetyenzisweni kwangaphandle.
Uncedo lwealuminium ngaphezulu kwentsimbi kunye nezinye izinto kukungasebenzi kakuhle kwayo okwenza ukuba kube lula ukusebenza nayo. Ukongeza ukhuseleko kumphezulu wayo, yongeza umgubo weplastester.
I-Aluminium yamkela uninzi lwepeyinti kunye nolunye usetyenziso olumanzi olwenza ukuba kube nepatio yealuminium entsonkothileyo kunye nobunzima izitayile zefanitshala .
Eziluncedo: Ikhaphukhaphu, ifikeleleka, isondlo esiphantsi, kulula ukusebenza nayo.
Bendlela: Ngaba ibiwe ngokulula, ifreyim e-aluminium engenanto okanye ebhityileyo inokubopha okanye isonge kubunzima obunzima.
Jonga le seti yefenitshala emnyama yentsimbi eAmazon. [ikhonkco elixhasiweyo]
Ngokubanzi, ifanitshala eyenziwe ngealuminium ayibizi kakhulu kunefanitshala eyenziwe ngentsimbi. I-aluminium ilindele ukuhlawula i-avareji ye- $ 1,150.00 ngengxoxo esetiweyo yesi-3 kunye ne- $ 2,200 kwiseti yepatio yesi-4.
Iiseti zepati zensimbi zingaqala nge- $ 1,800.00 kwiseti yencoko yesi-3 kunye ne- $, 2,300 kwiseti yepatio yesi-4.
Umtshato oya kuyo gcina iimagnethi zomhla
Khumbula nangona ukuba kwifenitshala yakho yangaphandle yesinyithi, kukho uluhlu olubanzi lwamaxabiso oluya kuxhomekeka kubungakanani, uyilo, izinto eziphathekayo kunye negama olikhethayo.
Ukugqitywa kunye nokongezwa kwe-cushioning kuya kongeza kakhulu kwiindleko. Qiniseka ukuba wenze uhlahlo-lwabiwo mali olucacileyo engqondweni ngaphambi kokukhetha ifanitshala yakho yangaphandle.
Iindleko ezinokuthi zongezwe
Ukwaleka kwepowder: $ 200 ukuya ku- $ 2000 kuxhomekeke kwinxalenye enokuba yiprojekthi ye-DIY okanye yobungcali. Kukwakho neemeko apho kuya kufuneka udibanise kwaye uphinde udibanise iinxalenye ezithile ngexesha lenkqubo yokwaleka komgubo.
Izitulo ezidityanisiweyo: i-800 ukuya kwi-2000 yeedola kwizitulo ezisemgangathweni ngelixa zinokubiza imali engange- $ 1,800 ukuya kwi- $ 3,000 kwisofa esemgangathweni.
Kuxhomekeka kweyakho uhlobo lwepatio kunye neemfuno njengoko into nganye inamandla kunye nobuthathaka bayo. Ukuba ufuna ukhetho olufikelelekayo kodwa oluhlala luhleli, ifanitshala yealuminium ifenitshala lukhetho olukhulu. Gcwalisa ifenitshala yepatio yealuminium ngengubo yomgubo ukongeza amandla kunye nokuqina.
Ngelixa isinyithi lukhetho olukhulu ukuba ufuna ukuba nefanitshala yokuhlala eyomeleleyo neyomeleleyo ongayishiya naphantsi kwemozulu yesaqhwithi.
Ukuba ukufudumeza okanye ukugcina ukubanda kuyinkxalabo yakho ngefanitshala yesinyithi, khetha ukuyibeka phantsi komthunzi okanye ukongeza ii-cushion kunye ne-padding kwifenitshala yakho yangaphandle yesinyithi.
I-aluminium yentsimbi ayiyi kuba nomhlwa ngenxa yesakhiwo sayo esiqinileyo. Njengoko igama lisitsho, i-aluminium enyibilikisiweyo igalelwa kwisamente ethi yona yomelele imile kokungunda kwayo. Kukho ifanitshala yeepatio eyenziwe ngetyhubhu yentsimbi ethelekiswa ne-aluminium eyenziweyo inokurusa ngokulula ngengubo engekho mgangathweni.
I-aluminium ye-cast ikuvumela ukuba uyibeke phantsi kwemozulu kwaye awudingi msebenzi wokucoca ukuze ugcine ukumelana kwayo nomhlwa.
ukutshintsha igama lokugqibela ku-ohio
Isinyithi esigutyungelwe nge-powder asiyi kurusa ixesha elide silungiswe ngokufanelekileyo ngaphambi kokuba kufakwe idyasi epheleleyo Kukwabalulekile ukuba nesambatho esisemgangathweni sokuthintela umoya okanye ukufuma okutyhutyhe ukutyabeka.
Kukho ixesha lokuphilisa uluhlu ngalunye lwengubo yomgubo ukuyenza ibe nokungena ngakumbi kwaye kuthintele iintanda kwingubo yomphezulu.
Yintoni oyithandayo xa kuziwa kwifenitshala yealuminium vs steel patio? Singathanda ukuva iingcinga zakho kwicandelo lamagqabaza apha ngezantsi. Ukuyila ngakumbi tyelela iphepha lethu malunga Izimvo zepatio ezivalelweyo .
bruno mars kunye nojessica caban 2016
izinto zokwenza e nashville for bachelorette party
imibono yangoku yokuzalwa yomfazi
Isipho sokukhumbula unyaka wesibini kuye
Uninzi lwezicatshulwa zothando kuye
izipho zomyeni ngosuku lomtshato